Maxaa diirada lagu saari doonaa shirka xasaasiga ee ka furmaya xarunta Xalane? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa diirada lagu saari doonaa shirka xasaasiga ee ka furmaya xarunta Xalane?
Maxaa diirada lagu saari doonaa shirka xasaasiga ee ka furmaya xarunta Xalane?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka Golaha Amniga Qaranka oo looga hadlaayo xaaladda adag oo ay dhex maquureyso Somalia.
Qorshaha shirka ayaa ah inuu ka dhaco xarunta weyn ciidamada AMISOM ee Xalane, waxaana ka qeybgali doona qaar kamid ah wakiilada ka howlgala Somalia.
Shirka ayaa waxaa diirada lagu saari doona amniga Muqdisho, waxaana qeyb ka noqon doona Madaxda ugu sareysa Qaranka, Xildhibaano, Wasiiro iyo Madaxda maamul Goboleedyada oo qaarkood iminka soo gaaray Muqdisho.
Shirka ayaa waxaa khudbado ku leh dhinacyada DFS u matali doona iyo Wakiilada lagu marti galiyay, waxaana bogaadiyay Madaxda Midowga Afrika.
Dhinaca kale, waxaa lagu wadaa in shirkan laga soo saari doono go’aamo dhanka amaanka ah oo ay isla gaari doonaan Madaxda Qaranka iyo kuwa maamulada ka jira dalka, kuwaa oo ku saleysnaan doona kuwo xal loogu raadinaayo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka.